आठ महिनाकी बालिकासहित एकै परिवारका तीन जनाले देहत्याग – Dainik Samchar
August 23, 2021 294
कनकाई नगरपालिका–१ रमाइलो टोलमा आठ महिनाकी बालिकासहित एकै परिवारका तीन जनाले देहत्याग गरेका छन् । देहत्याग गर्नेमा ४० वर्षीय रवीन विश्वकर्मा, उनकी २९ वर्षीया श्रीमती मुना विश्वकर्मा र आठ महिनाकी छोरी रुविना विश्वकर्मा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई आफ्नै घरभित्र आज बिहान झु ‘ण्डि’एको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ । मुनाले आठ महिने छोरीलाई छातीमा टाँ’सेर ब’र्कीले बाँ’धे’र झु ण्डि’एको अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राकेश थापाले बताउनुभयो ।
मृतक रवीन वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि केही दिन पहिले काठमाडौँसम्म गएको तर पोजेटिभ देखिएका कारण फर्किएर आएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार रवीन वैदेशिक रोजगारमा स्थानीय युवालाई पठाउने एजेन्टका रुपमा काम गर्दै आएका थिए । आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण खुल्न नसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनास्थलमा प्रहरीको टोली पुगेको र सेनाको टोलीलाई पनि बोलाइएको प्रहरीले जनाएको छ । मुचुल्का उठाएर ढोका फो’डे’र भित्र पस्ने र घटना प्रकृति हेरेर थप अनुसन्धान गर्ने एसपी भट्टराईले बताए ।
यो पनि : पेट सिटीस्क्यान सञ्चालन नहुँदा बिरामीलाई समस्या
झापाको विर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल अस्पतालले क्यान्सर बिरामीका लागि ल्याएको पेट सिटीस्क्यान उपकरण सञ्चालनको अनुमति नपाउँदा एक वर्षदेखि थन्किएको छ ।
उपकरण सञ्चालन नहुँदा त्यस्ता बिरामीे महँगो खर्च गरेर भारतमा उपचारका जाने बाध्य भएका छन् । सो उपकरणले क्यान्सर कहाँ कहाँसम्म फैलिएको छ, उपचार कस्तो भइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने गरिन्छ । यसले गर्दा चिकित्सकलाई क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि सहज हुने गर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खरिद गर्न अनुमति दिए पनि सञ्चालनका लागि अनुमति नदिँदा त्यतिकै थन्किएको छ । कानून बन्न ढिलाइ गरेकाले अस्पतालले क्यान्सर बिरामीको उपचारका लागि ल्याएको उक्त उपकरण सञ्चालनमा समस्या परेको अस्पतालका निर्देशक डा वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । “सरकारले कानून नबनाएकाले अझैसम्म सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा हजारौ बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैनन् सञ्चालनका लागि धेरै पटक कानून चाँडो बनाउन भन्यो तर सुनवाइभएको छैन ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अस्पतालका लागि यो उपकरण आउछ भनेर वातावरण्ीाय मूल्याङ्कन प्रभाव (इआइए) समेत पास गराए पनि कानून बन्न ढिलाइ भएकाले उपकरण सञ्चालनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ रहेको छ । “मन्त्रालयले एक वर्ष अघिदेखि नयाँ ऐन बनाउनुपर्दछ भनेर हामीलाई भनिरहेको छ”, अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद प्रसाईले भन्नुभयो, “उपकरण यतिकै राख्न मिल्दैन । हामीले चलाएका चलै छौँ तर चलाएको उपकरणमा बिरामीलाई उपचार गर्न पाएका छैनौँ ।”
उपकरणद्वारा क्यान्सर रोगको पहिचान गर्न, बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिन मद्दत पुग्छ । यसैगरी यस रोगमा प्रयोग भएको औषधि शरीरमा प्रभावकारी भए नभएको तथा शरीरमा क्यान्सरको कण भए नभएको पत्ता लगाउने, तथा मुटु रोग तथा विभिन्न खाले दिमागको रोगको अवस्था जान्न पनि सघाउ पु¥याउने समेत उपकरणले गर्ने गर्दछ । बिरामीमा कुन तहको क्यान्सर भएको छ र त्यो कुन अवस्थामा छ भनेर जाँच गर्न यस पेट सिटीस्क्यानको प्रयोग गरिन्छ ।
करिब रु ७० करोडमा खरिद गरिएको उपकरणमा २४ घण्टा वातावरणनुकूलतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । उपकरण सञ्चालन नआउँदा मासिक रु २० लाख बैंकसहित अन्यमा खर्च भइरहेको छ । उपकरण सञ्चालनका लागि समेत न्यूक्लियर मेडिसिन चिकित्सकसमेत अस्पतालले एक वर्षदेखि तलब खुवाएर राखिसकेको छ । उपकरण सञ्चालन नभएपछि त्यतिकै ति चिकित्सक बसिरहेका छन् ।
पोखरा, चितवन, काठमाडौँलगायत ठाउँबाट बिरामी अस्पतालमा पेट सिटीस्क्यान उपकरण छ भनेर अस्पतालमा आउने गरेता पनि ती बिरामीलाई उपचार गर्न नपाएको अस्पतालका निर्देशक डा यादवले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँमा रहेका दुई प्रयोगशालामा समेत पेट सिटीस्क्यान भए पनि कोभिड–१९ का कारण नियमित हवाई सञ्चालन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । नियमित उडान नहुँदा बिरामीको लागि लगाउने रेडियो आइसोटोप ल्याउन नसकेको कारणले काठमाडौँमा रहेका पेट सिटीस्क्यान उपकरण सञ्चालनमा नआएको हो । यसले गर्दा अहिले पेट सिटीस्क्यानका लागि क्यान्सरका बिरामी उपचारका लागि कलाकत्ता, नयाँ दिल्ली जाने गर्दछन । भारत जाँदा करिब रु पाँच लाख खर्च हुने गरेको छ तर नेपालमा अस्पतालले उपकरण सञ्चालनको अनुमति पाए आफूहरुले एक बिरामीको रु ६० देखि ७० हजारमा उपचार गर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
बिरामीका लागि उपचारका लागि उपकरण सञ्चालनसँगै ‘रेडियो आइसोटोप’ समेत प्रयोग गरिन्छ । रेडियो आइसोटोप ल्याएको चार घण्टाभित्र बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । भारतको कोलकत्ताबाट खरिद गरेको दुई घण्टामा झापाको वित्तामोडमा उक्त रेडियो आइसोटोप आइपुग्दछ र बिरामीलाई समेत सजिलै उपचार गर्न सकिने भएकाले अस्पतालमा पेट सिटीस्क्यान जडान गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा यादवले जानकारी दिनुभयो ।
कोलकत्ताबाट सिलगुडीको वागडुग्रा विमानस्थलमा एक घण्टा र त्यहाँबाट आधा घण्टामा विर्तामोडमा उक्त रेडियो आइसोटोप ल्याइसक्ने भएकाले आफूहरुले बिरामीको उपचार गर्नका लागि पेटस्क्यान उपकरण राखिएको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईले मन्त्रालयले चाँडै कानून बनाएर उपकरण सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उक्त उपकरणबाट दैनिक २० देखि ५० जना बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ ।
दक्षिणपूर्वी नेपालमा रहेको क्यान्सर अस्पतालमा स्थापना भएपछि नेपालसहित भारतबाट पनि बिरामी उपचार गर्नका लागि आउने गरेका छन् । अस्पतालमा निर्देशक डा यादव नेतृत्वमा डा प्रियङ्का कटुवालसहितको नौ सदस्यीय विशेषज्ञ टोली कार्यरत छ । अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईले क्यान्सरका बिरामीलाई नेपालमा नै उपचार गराउन उद्देश्यले अस्पताल स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यहाँका भएका विशेषज्ञ चिकित्सकले जस्तोसुकै क्यान्सरको पनि उपचार गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
अस्पतालमा सङ्क्रमण (एन्टिब्यक्टरिया) मुक्त शल्यक्रिया कक्षको समेत निर्माण गरिएको छ । मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो प्रत्यारोपण गर्नाका लागि सङ्क्रमणमुक्त शल्यक्रिया निर्माण गरिएको छ । उहाँले प्रत्यारोपण गर्न सजिलो र बचाउने गा¥हो पर्ने भएकाले सङ्क्रमणमुक्त शल्यक्रिया कक्ष निर्माण गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा यादवले बताउनुभयो ।
Prevयसरी सौतेनी आमा छोरा बिच भयो हानाहान
Nextटिकटक स्टार स्मारिका ढकालको डिभोर्स
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख २३ गते बिहिबार , आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पतिसंग अलग भएपछि आमा बनेकी थिइन् नुसरत, नयाँ यि प्रेमी को हुन् ?
अनटेष्ट कार र स्कुटर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, एक जना घाइते
सगरमाथा हेर्ने सलमानको सपना चकनाचुर, विप्लव बने बाधक
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिता डंगोलले ? (8266)
यौ,न दु,र्व्य वहारको घट,नामा नाम जोडिएपछि माल्भिकाले माफी माग्दै के भनिन्? (7106)